Odayaasha Cadaado Oo Kabiyo Diidan Heshiiska Galmudug Iyo Ahlu Sunna – Hornafrik Media Network
Odayaasha Cadaado Oo Kabiyo Diidan Heshiiska Galmudug Iyo Ahlu Sunna
Odayaasha Dhaqanka iyo Siyaasiyiinta reer Cadaado ayaa waxay weli ka biyo diidan yihiin heshiiskii ay dhawaan Galmudug iyo Ahlu Sunna ku kala saxiixdeen Magaalada Djibouti ee Xarunta Jabuuti.
Odayaasha iyo Siyaasiyiinta ka soo jeeda Degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid aan la aqali karin, iyagoo ku andacoonaya inuu khilaafsan yahay Dastuurka Galmudug.
Odayaasha iyo Siyaasiyiinta oo Isniintii la kulmay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa u sheegay in loo baahan yahay in dib loogu laabto heshiiskan ka hor inta Magaalada Dhuusamareeb lagu qaban xafladda dhameystirka ee heshiiskaasi.
Soo jeedinta Odayaasha iyo Siyaasiyiinta reer Cadaado waxay ku soo biyo shubatay in qodobada qaarkood ee lagu heshiiyay wax laga bedelo haddii la doonayo in la helo Galmudug mideysan. Madaxweynuhu waxaa uu u sheegay inay soo dhaweynayan soo jeedinta dadka reer Cadaado waxna laga qaban doono cabashadooda isagoona Taladadii u safray Magaalada Dhuusamareeb.
Iyadoo maanta lagu wado in Dhuusamareeb lagu qabto xafladda dhameystirka ee heshiiskii Ahlu Sunna iyo Galmudug ayaa waxaa ka qaybgalkiisa ka horyimid Odayaasha Dhaqanka iyo Siyaasiyiinta Cadaado oo ku doodaya inaanan weli waxba laga bedelin qodobada heshiiskaasi siyaasi daraadeedna aanay u socon Dhuusamareeb.
Kulan looga hadlay Howlgalka AMISOM Oo Ka Dhacay Dalka Itoobiya.